Muqdisho Oo Yeelan Doonta Garoon Diyaaradeed Labaad Oo Casri Ah – Bandhiga
Muqdisho Oo Yeelan Doonta Garoon Diyaaradeed Labaad Oo Casri Ah
MUQDISHO (Bandhiga Media) – Magaalada Muqdisho waxaa maalmihii u dambeeyey ku sugnaa, wafdi ka socda shirkad shiinaha laga leeyahay oo lagu magacaabo AVIC (Aviation Industry Corporation of China), taas oo ka shaqeysa hawlaha la xiriira duullimaadyada diyaaradaha iyo horumarinta garoommada.
Saraakiil ka tirsan Maamulka Garoonka Muqdisho ayaa warbaahinta u sheegay in uu jiro heshiis ay wada gaareen Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo shirkadda AVIC.
Heshiiska oon ilaa iyo hadda si rasmi ah loo shaacin, waxay xogaha hordhaca ah ee warbaahintu heshay sheegayaan in uu khuseeyo dhismaha garoon cusub oo magaalada Muqdisho yeelan doonto.
Wafdiga Shiineyska ah oo Arbacadii shir la qaatay Wasiirka Duulista Hawada Maxamed Cabdullahi Salaad Oomaar , waxay sida qorshuhu yahay maanta oo Jimce ah la kulmi doonaan Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Shirkadda AVIC ayaa horay heshiis ula gashay Dowladda Federaalka Soomaaliya xilligii Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, inkastoo heshiiskaasi sidii loogu talo galay u fuli waayey.
Heshiiska oo ahaa in AVIC ay Soomaaliya keento laba diyaaradood oo nooca rikaabka ee MA60 loo yaqaanno ah, uma dhicin sidii la qorsheeyey, kaddib ismaandhaaf soo kala dhex galay Agaasimihii Somali Airlines ee xilligaas Maxamed Guuleed iyo Wasiirkii Duulista ee markaas shaqeynayey, Cabdullaahi Ciilmooge.
Shiinaha ayaa labadii sano ee u dambeeyey kordhiyey dhaq dhaqaaqa ganacsi iyo midka diblumaasiyadeed ee uu la leeyahay Soomaaliya, waxaana jira mashaariic badan oo shirkado Shiinaha ka diiwaan gashani ay dalka Soomaaliya ka fuliyeen, tan iyo sannadkii 2016.